सागा द रिंगको प्रभु: कुन पुस्तकले यसलाई बनाउँदछ वर्तमान साहित्य
अंगूठियहरुको सागा को प्रभु तीन पुस्तकहरू अप गरेको छ। यद्यपि यो कथा सबैजनाको ओठमा थिएन जब सम्म यो सफलताको लागि सुरू गरिएको फिल्म रूपान्तरण नभएसम्म यो कथित धेरै लामो समय अगाडि लेखिएको थियो।
आज रिंगट फिल्महरूका भगवानलाई प्रायः सबैजनाले चिन्छन्, तर यदि तपाईं उहाँलाई सोध्नुहुन्छ भने औंठी को मालिक को गाथा पुस्तकमा, ती चीजहरूको बारेमा जुन फिल्ममा देखा पर्दैन, वा ती अनौंठो स्क्रिप्टले उनीहरूलाई दिएको मोड़, म तपाईंलाई जवाफ दिन सक्दिन। र, पुस्तकहरूमा, त्यहाँ धेरै चीजहरू थिए जुन फिल्ममा देखा परेन, साथै धेरै पक्षहरू जुन परिवर्तन भयो र मूल कहानीमा मनपर्दैनथ्यो। त्यसकारण, आज हामी तपाईंसँग पुस्तकहरू, तिनीहरूका सिर्जनाकर्ता र उनीहरूसँग सम्बन्धित अन्य उपन्यासहरूको बारेमा सीधा कुरा गर्न चाहन्छौं।
1 कसले रिंगको गाथा लेख्यो
2 कतिवटा पुस्तकहरू प्रभुको रिंग्स गाथा बनाउँदछन्
4 द लर्ड अफ द रिंग्स पछि पुस्तक (जुन अघि छ)
कसले रिंगको गाथा लेख्यो
के धेरै लेखकहरू चाहान्छन् उनीहरूको रचनाहरूको बारेमा सुन्न सकिन्छ, र उनीहरूको बारेमा होइन। यस कारणका लागि, केहि छद्म नाम प्रयोग गर्दछ, वा केवल साक्षात्कार वा पुस्तक हस्ताक्षर मा देखा पर्न चाहँदैनन् आफ्नो अज्ञातता कायम राख्न र पुस्तकलाई नेतृत्व लिन दिनुहोस्।
हामी तपाईंलाई यो किन भन्दछौं? ठीक छ, यदि तपाईंले द लॉर्ड अफ द रिंग्स सुन्नुभयो भने, तपाईंलाई राम्ररी थाहा छ कि यो एउटा पुस्तक हो जुन फिल्म पनि बन्यो (र एक टेलिभिजन श्रृंखला)। तर यदि तपाईं यसको साटो जेआरआर टोलकिएन सुन्नुभयो भने, तपाईं लेखकको नाम उहाँ लेख्नुभएको पुस्तकहरूसँग जोड्नुहुन्न।
JRR Tolkien वा, उनको वास्तविक नाम, जोन रोनाल्ड र्यूएल टोलकिएन, दक्षिण अफ्रिकामा जन्म भएको लेखक थिए (उनको समयमा यो ब्लोएमफोंटेन थियो), जर्मन र अंग्रेजी मूलका। उनी पहिलो तीन वर्ष अफ्रिकामा बसोबास गरेपछि इ England्ल्यान्डमै बसोबास गरे। उनका बुबाको अचानक मृत्यु भयो, जब उनले परिवारसँग पुनर्मिलन गर्न अफ्रिकामा आफ्नो व्यवसाय पूरा गर्न खोज्दै थिए, जसले आफ्नी श्रीमती र दुई बच्चाहरुलाई कमाउन छोडेको थियो। यस कारणले गर्दा, तिनीहरू आफ्नी आमाको परिवारसँग बस्न सके।
यो आमा हुनुहुन्थ्यो जसले बालबालिकाको शिक्षाको ख्याल राख्नुहुन्थ्यो र टोलकि theन सबैभन्दा मेहनती थिए। उहाँ वनस्पतिशास्त्र मन पराउनुहुन्थ्यो साथै उनीहरू बस्ने ठाउँको नजिकको वनमा पस्नुभयो। तर उनी या त भाषाहरू सिक्नमा खराब थिएनन्, चार वर्षको उमेरमा ल्याटिन भाषा सिक्ने (त्यस उमेरमा उनलाई पढ्न र लेख्न जान्दथ्यो)।
१ 14 वर्षको उमेरमा, टोलकिनले आफ्नी आमालाई गुमायो र पादरी फादर फ्रान्सिस जेभियर मोर्गन उनको र आफ्नो भाइको हेरचाह गर्छन्। उनीहरूको परिवार उनीहरूको बारेमा केहि जान्न चाहँदैनथे किनकि उनीहरू क्याथोलिक धर्ममा परिवर्तित भएका थिए। यस पादरीमार्फत उनले स्पेनी र कला सिके, विशेष गरी चित्रकला।
Exeter कलेज बाट BA, अंग्रेजीमा ऑनर्स डिग्री हासिल गरे। यद्यपि उनले WWI मा ब्रिटिश सेनामा भर्ना हुन छोडे। बिमारीका कारण उनलाई इ England्ल्याण्ड सारियो जहाँ उनी आराम गर्दै थिए। यो समयमा उनले लेखेका थिए "हराएको कथाको पुस्तक" (त्यो नामबाट यो परिचित लाग्दैन, तर यदि हामी तपाईंलाई सिल्मरिलियन भन्छौं भने निश्चित रूपमा हो)।
तर वास्तवमै उनी सबैभन्दा प्रसिद्ध पुस्तक सबैभन्दा पछि लेखिएको थियो १ 1925 २।, जब उनी पेम्ब्रोक कलेजमा प्राध्यापकको रूपमा ओक्सफोर्ड फर्किए। उनीसँग द होब्बिट र पहिलो दुई लर्ड अफ रिंग पुस्तकहरू लेख्न समय थियो।
सबैभन्दा पहिले उनले एउटा प्रकाशकको ​​साथ प्रकाशित गरे दि होब्बिटले आशा गरे कि यसले बच्चाहरूलाई अपील गर्दछ। समस्या यो हो कि वयस्कहरूले यसलाई पनि पढे, यो यस्तो सफलता थियो कि उनीहरूले उत्तरक्रमको लागि भने।
यो १ 1965 untilXNUMX सम्म प्रकाशित भएको थिएन, यो लर्ड अफ द रिंग्सको पहिलो संस्करण हो र यस दिनसम्म अझ धेरै संस्करणहरू चलिरहेको छ (जहाँ नयाँ कागजातहरू समावेश गरिएको थियो, दोस्रो संस्करणमा जहाँ, पहिलो भागमा (समुदायको समुदाय) औंठी), क शायरको अभिलेखमा नोट गर्नुहोस्).
कतिवटा पुस्तकहरू प्रभुको रिंग्स गाथा बनाउँदछन्
रिंगको गाथाको सृष्टिकर्ता पुस्तकहरूको सम्बन्धमा सरल उत्तर तीन हो। जहाँसम्म, यदि हामी यी पुस्तकहरूको ईतिहासमा थोरै हेर्छौं, र विशेष गरी सिर्जना गरिएका फरक-फरक संस्करणहरूमा, हामी एक पूरा पुस्तकको बारेमा कुरा गर्न सक्दछौं जुन तीन अंशहरू एक अर्काबाट भिन्न छन्; तर पुस्तकहरू आफैंमा रहेको डिभिजनको पनि।
र त्यो हो Seen Theings Lord Lord Lord।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। You।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।। तर ती सबै पुस्तकहरू धेरैमा विभाजन गरिएको थियो।
औंठीको फेलोशिप। यो पहिलो पुस्तक हो र यसलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको थियो: एक प्रस्तावना र दुई फरक भाग: औंठी आफ्नो मार्गमा छ र रिंग दक्षिणमा जान्छ।
दुई टावर्स। टल्किएनको दोस्रो किताब लर्ड अफ द रिंग्स सागामा। यस पुस्तकलाई दुई भागमा पनि विभाजित गरिएको छ, द बेट्रियल अफ इसेनगार्ड र द रिंग गोस्ट ईस्ट, जुन लेखकहरूले उनीहरूका लागि रोजेका थिए।
राजाको फिर्ती। द लर्ड अफ द रिंग्स पुस्तकहरूको अन्तिम पुस्तक र पहिले जस्तो भएको थियो, यसलाई पनि दुई भागमा विभाजित गरिएको थियो, द वार अफ द रिंग र द एन्ड अफ थर्ड एज। जे होस्, ती शीर्षक हटाईयो। थप रूपमा, यसमा एक उपसंहार छ जहाँ स्यामले आफ्ना बच्चाहरूलाई कथा भन्छ।
तथापि, लर्डर अफ रिंग्स गाथा आफैमा पहिले नै उपलब्धि हो, यो जेआरआर टोलकिएनले पहिले लेखेको पुस्तकबाट प्रभावित भएको थियो। हामी होब्बिटको बारेमा कुरा गर्छौं।
जो आश्चर्य गर्छन्, को लागी होब्बिट पुरा पुस्तक हो, अंश बिना नै, यद्यपि फिल्म रूपान्तरण आफैंले तपाईलाई अन्यथा सोच्न लगाउन सक्छ। यसले फ्रोडोका काका बिल्बो बग्बिन्सको कथा बताउँदछ, र कसरी उसले आफ्नो साहसमा गोलम फेला पारे। र, उहाँसंगै, त्यो घण्टी समाप्त भयो कि यसलाई चोरी गरी आफैंको लागि राख्यो।
हामी भन्न सक्छौं कि यो पुस्तकले ईतिहासमा केहि घटनाहरूको लागि धेरै स्पष्टीकरण दिन्छ। तसर्थ, लेखकले सिर्जना गरेको सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको राम्रो स्थिति हुनु अघि यसलाई पढ्न सिफारिस गरिन्छ।
द लर्ड अफ द रिंग्स पछि पुस्तक (जुन अघि छ)
अन्तमा, हामी तपाईलाई रिंग्स प्रभुको पुस्तकको अर्को छोड्न चाहँदैनौं जुन तपाईलाई थाहा हुनुपर्दछ। र यो त्यो हो, जे भनिएको छ भने यो पछिल्लो पछि पढ्नुपर्नेछ, वास्तविकतामा यी पृष्ठहरूमा के भनिएको छ त्यो धेरै अघि भएको थियो। जेआरआर टोलकिएन आफ्नो ब्रह्माण्डको पुरातात्विक इतिहास र पुरातात्विक कथाको पूर्ण इतिहासको साथ चाहन्थे। र त्यो उसले सिर्जना गरेको हो।
पुस्तकको शीर्षक भएको रूपमा, सिलमिलियनले धेरै कथाहरू, कथाहरू, र होबिट र द लर्ड अफ द रिंग्सको कथासँग मिल्दोजुल्दो चरित्रको कथा राख्दछ। तर पुरानो अवधिको समयदेखि ती टिप्पणीहरूलाई संदर्भ गर्दै केही नायकहरूले युद्ध वा विगतको बारेमा गरेका टिप्पणीहरू।
यो रिंगको प्रभु पछि किन पढ्नु पर्छ? ठिक छ, किनभने यो यत्तिको पूर्ण र जबरजस्ती छ, कि यदि तपाईंसँग पहिले आधार छैन भने, यसलाई पढ्न गाह्रो छ र बुझ्न गाह्रो छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » रिंग श्रृंखलाको प्रभु